बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन यसरी हुनेछ ! – HamroKatha
बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन यसरी हुनेछ !
आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक र व्यक्तिगत १७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । फोहर फाल्ने क्षेत्र करिब ३१ हजार वर्गमिटरमा फैलिएको छ ।
हाम्रो कथा २०७६ वैशाख २० गते १५:५६
उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालिन उपाय निक्लेको छ । काठमाण्डु उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा पटक–पटक आईरहने समस्या अन्त्य गर्न नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साईट निर्माण सुरु भएको छ । अब भने उपत्यकाको फोहर लगेर नुवाकोटको बञ्चरे डाँडामा व्यवस्थित गरिनेछ । अहिले फोहर फालिने ठाउँ सिसडोलभन्दा २ किलोमिटर अगाडी पर्छ यो बञ्चरे डाँडा ।
डाँडाको भौगोलिक संरचनाको कुरा गर्नु पर्दा बिचमा डाँडा छ अनि घेरा लगायजस्तै गरि बनेको छ खाडल । पहिले यो खाडलमा कोल्पु खोला बग्थ्यो । तर खोलालाई बञ्चरे डाँडा नघुमाई सिधै बग्ने गरि डाईभर्ट गरिएको छ । डाँडाको प्राकृतिक संरचना भने नविगारिकन यहिं बनाईनेछ फोहर फाल्ने संरचना । यो डाँडालाई जस्ताको तस्तै राखि वरिपरिको यहि खाडलमा फोहर फालिनेछ ।
आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक र व्यक्तिगत १७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । फोहर फाल्ने क्षेत्र करिब ३१ हजार वर्गमिटरमा फैलिएको छ । बञ्चरो जस्तै देखिने यो डाँडामा गएको बिहिबारदेखि निर्माणको काम सुरु भएको छ ।
डाँडाको दुवैतर्फ उचाई बराबरको रिटेनिङ स्ट्रक्चर बनाईनेछ । रिटेनिङ स्ट्रक्चर अघि एक वटा ५० मिटर बाई ५५ मिटरको र अर्को ३० मिटर बाई ४० मिटरको गरी दुई वटा पोखरी बन्नेछन् । जहाँ फोहरबाट निस्किएको दुषित पानीलाई ट्रिटमेन्ट पछि पम्प गरेर पुनः फोहरमै फालिन्छ । मानवीय स्वास्थ्यलाई असर गर्ने दुषित पानी जमिन मुनी र खोलामा जान नदिने खालको संरचना बन्नेछ यहाँ । त्यसैले यसलाई सेनेटरी ल्याण्डफिल साईट भनिएको छ ।
दुई चरण गरेर अबको डेढ बर्ष भित्रमा ल्याण्डफिल साईट निर्माण सम्पन्न हुनेछ । तर निर्माण सम्पन्न हुँदै जाने फोहरपनि फाल्न मिल्ने गरि यसको संरचना बनाईन लागिएको हो । यसो भन्नुको अर्थ हो अबको दुई महिनापछि यहाँ उपत्यकाको फोहर फाल्न मिल्ने बनाईदैछ । पुर्ण क्षमता सञ्चालनमा ल्याउनका लागि निर्माणका कामहरु सँगै हुनेछन् ।
अहिले उपत्यकाबाट करिब ६५० टन फोहर दिनहुँ सिसडोलमा फालिन्छ । यहि परिमाणको फोहर यहाँ फाल्ने हो भने अबको २० बर्ष कुनै समस्या हुन्न । तर प्रशोधन सहित फोहर व्यवस्थापन गर्दा भने ४० बर्ष यहाँ फोहर फाल्न सकिनेछ ।
अहिले काठमाण्डु ललितपुरसहित उपत्यकाको ६ जिल्लाका १८ स्थानीय तहले सिसडोलमा फोहर फाल्ने गरेका छन् । २०६३ सालमा तीन बर्षका लागि फोहर फाल्ने योजना सहित सिसडोलमा फोहर फाल्न थालिएको थियो । तर अरु विकल्प नहुँदा १२ बर्षदेखि उपत्यकाको फोहर यहिं थुपारिएको छ ।
बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न भन्दै जाईकाको सहयोगमा दुई दशक अघिनैं कन्सेप्चुअल डिजाईन बनेको भएपनि अहिलेसम्म यसको निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । तर सरकारले गएको मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफ्नै नेतृत्वमा यसको निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएपछि यसको निर्माणले बल्ल तिव्रता पाएको छ ।